M/wayne Sheekh Shariif oo xilkii ka qaaday wasiirkii beeraha,dhirta iyo daaqa ahaana R/w kuxigeenka dowladda. – Radio Daljir
M/wayne Sheekh Shariif oo xilkii ka qaaday wasiirkii beeraha,dhirta iyo daaqa ahaana R/w kuxigeenka dowladda.
Maarso 30, 2012 12:00 b 0
Mogadishu,March 30 -Madaxwaynaha dowladda faderaalka ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa xilkii ka qaaday wasiirkii beeraha, dhirta, daaqa ahaana raysal wasaare kuxigeenka labaad ee dowladda Maxamed Maxamuud Xaaji Ibaarhim.
Wareegto kasoo baxday xafiiska madaxwaynaha oo nuqul ka mid ah lasoo gaarsiiyay warbaahinta ayaa lagu sheegay xilka qaadista in loo cuskaday kadib markii uu xilkii gudan waayay wasiirkii hore ee baaraha, dhirta iyo daaqa dowladda faderaalka iyo qoraal xilka qaadis ah oo xafiiska r/wasaaraha uu gaarsiiyay madaxwaynaha dowladda KMG Shariif Sheekh Axmed.
Maxamed Maxamuud Xaaji Ibraahim wasiirkii hore ee beeraha iyo raysal wasaare kuxigeenka dowladda KMG ah ee Soomaaliya ayaa dhowaan soo saaray wareegto uu kaga hor yimid aqoonsigii dowladda ay siisay maamulka Khaatumo State ee looga dhawaaqay degmada Taleex ee gobolka Sool, inkastoo markii dambe uu cudur daar ka bixiyay.
Wasiirkii hore ee beeraha Maxamed Maxamuud Xaaji Ibraahim ayaa ka hor inta aan lagu soo darin liiska wasiirada xukuumadda raysal wasaare C/weli Maxamed Cali “Gaas” waxaa uu kaaliye macalin ka ahaa iskuul ku yaala magaalada London ee xarunta dalka Ingiriiska, waxaana magacaabistiisu si weyn uga fajacisay qaar ka mid ah dadkii ay wada shaqaynayeen.
Wafti ka socda Midawga Yurub oo Garoowe kula kulmay Madaxda Puntland.
R/wasaaraha Soomaaliya oo u dhoofay dalka Kenya.